Is-Adeeg iyo Matoorada Raadinta | Martech Zone
Is-Adeeg iyo Matoorada Raadinta
Isniin, November 12, 2012 Sabti, Noofembar 10, 2012 Douglas Karr
Mid ka mid ah hab lagu hagaajinayo sii-haynta macaamiisha iyo qanacsanaanta guud ee macaamiisha ayaa ah in la soo saaro waxyaabo ka caawiya macaamiisha naftooda inay is caawiyaan. Kaliya maahan inay jiraan horumarin lagu qanco macaamiisha, waxaa jira kharash toos ah oo keyd ah oo laxiriira macaamiisha oo aan xirneyn khadadkaaga adeegga macaamiisha. Daabacaadda saldhiggaaga aqooneed, su'aalaha inta badan la isweydiiyo, guntimaha iyo tusaalooyinka ay matoorada raadinta ka heli karaan ayaa suurta gal ka dhigaya - in aan gadaal laga gelin meel laga soo galo cabsi laga qabo tartamayaasha inay helaan.
Daraasadihii ugu dambeeyay ayaa noo sheegaya in macaamiil aad iyo aad u tiro badani ay doorbidaan is-u adeegid ka badan inta ay la xidhiidhayaan wakiilka taageerada; iyo sida muuqaalka hoose uu muujinayo, dad tiradoodu dhan tahay 91% ayaa sheegaya inay isticmaali doonaan saldhig aqooneed haddii ay daboolayaan baahidooda. Tani waa war weyn oo loogu talagalay ganacsiyada; is-u adeegiddu waa sida ugu dhakhsaha badan uguna kharashka badan ee waxtar u leh taageerada macaamiisha. Hagaajinta Macluumaadka Zendesk ee Raadi Adeeg Is-Adeeg Sirdoon oo Dheeraad ah
Tags: ku qanacsanaanta macaamilkaAdeegga macaamiishaFAQsis-adeegid
Nov 12, 2012 saacadu markay tahay 3:23 PM
Tani waa waxyaabo xiiso leh! Qaar ka mid ah falcelinta degdegga ah ee nin sameeya maaraynta aqoonta iyo is-u adeegidda nololeed:
1. Waa wax yaableh in Oracle laga soo xigtay qaybta ku saabsan SEO isla markaana la wadaagayo waxyaabahaaga iyada oo loo marayo makiinadaha raadinta webka, maaddaama ay tusaale u yihiin shirkadda B2B ee AAN wadaagin macluumaadka aasaasiga ah ee aqoonta Google iyo al. Wanaagsan ama ka xun, waxay ku xiraan maaddadooda KB gadaal gelitaankooda
2. Xogteydu aad iyo aad ayey uga duwan tahay - aad ayey uga hooseysaa - marka loo eego "40% ayaa wici doona xarunta xiriirka ka dib is-adeegid." Haddii aad ka fikirto khibradaada B2C ee Amazon, Microsoft, iwm, waxaad arki kartaa in tani ay tahay amarro aad u sarreeya. Laakiin xitaa jawiga B2B, mugga websaydhka waa 10x - 30x mugga xarunta taageerada, ama ka badan.
3. Waxaan u maleynayaa in Gartner uu ku qaldan yahay wakiillada dalxiiska. (70% itimaal) 🙂
Nov 12, 2012 saacadu markay tahay 4:17 PM
Ka dib markii Penguin & Panda cusbooneysiiyaan waxyaabaha ku jira waa boqorka. Daabacaadda aasaaska aqoontaada ayaa hubaal ka dhigi doonta SEO-gaaga